ခေတ်ရနံ့ ၊သြဂုတ်လ၊၂၀၁၄ ထုတ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမိုင်း၊ ပြည်သူဘက်ကအပြတ်ဘက်လိုက်မယ်ဆိုသည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်တာဗျူး၊သမိုင်းပညာရှင်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဟောင်းဦးစိုင်းအောင်ထွန်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊၂ဝ၁၅နီးလေအားပျက်ဖွယ်ကြုံလေလား၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကုန်စည်(သို့) ဆန်စသည်တို့နှင့်အတူဝင်းထွဋ်ဇော်၊သန်းစိုးနိုင်၊ဦးတင်ဦး(ကျူရှင်)၊တင်နိုင်တိုး၊ ဒေါက်တာ ညီညီ၊ ထင်အောင်ကျော်၊ ကိုဝ၊ နတ်မှူးတို့၏ စာပေလက်ရာများဖြင့်နိုင်ငံရေးရာ၊သမိုင်းရေးရာ၊စီးပွားရေး၊သုတ၊ရသစုံလင်စွာဖြင့် …….
ခေတ်ရနံ့ ၊သြဂုတ်လထုတ် မာတိကာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိနစ်နှစ်ဆယ်ထဲကစက္ကန့်ပိုင်း …………………………..ဆရာမျိုး(လှည်းတန်း) ၄၃
မြို့ပြမိုးကောင်းကင်……………………………………. ရင်ရင်လေး ၅၉
သက်တော်ရာကျော်စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆု ……………………ဟန်ဇော် ၁ဝဝ
ဂျိုကိုဝီ (သို့မဟုတ်) ပြည်သူ့သူရဲကောင်း………………………ကိုဝ ၁၆၈
စိုးစံဝင်း ……………………………………………………………………….. ၂၃